Zinedine Zidane Oo Hanjabaad U Diray Barcelona Xilli Aan La
Zinedine Zidane ayaa ka hadlay tababarka ay kusoo laabteen ciyaartoyda kooxdiisa Real Madrid oo loo ogolaaday inay hormooyin u samayn karaan, xilli la filayo in horyaalka LaLiga uu dib u bilowdo bisha June ee soo aaddan.
Tababaraha reer France ayaa waxa uu sheegay in usbuucan uu kooxdiisa u ahaa mid wanaagsan, toddobaadka dambena ay shaqo kasii wanaagsan inta ay hadda sameeyeen ay qaban doonaan jidh ahaan iyo farsamo ahaanba.
Waraysi uu siiyey telefishanka Real Madrid, ayaa waxa uu hanjabaad dadban ugu diray Barcelona oo sidooda oo kale hadda uun kusoo laabatay tababarka, farqi laba dhibcood ahna uu u dhexeeyo dhibcaha kala-sarraynta horyaalka LaLiga.
Zidane waxa uu sheegay qorshaha kooxdiisu uu yahay inay ku guuleystaan horyaalka oo ay kaalinta koowaad la wareegaan marka lagu soo laabto ciyaaaraha.
“Toddobaadkan waxa uu ahaa mid wanaagsan sababtoo ah, waxaanu u shaqayn karnay kooxo yaryar. Wax kasii badan ayaanu samayn karnaa taatiko ahaan, jidh ahaan iyo farsamo ahaanba.” Ayuu yidhi Zidane oo ka hadlayay tababarkii ay dhawrka maalmood wadeen.
“Kooxdu waxay u muuqatay inay fiican tahay toddobaadkan, usbuuca dambena way kasii wanaagsanaan doontaa. Waaa inaanu u fikirno si togan, maadaama aanu nasiib u yeelanay inaanu shaqada kusoo laabano, inaanu ku sugnaano garoonka, anigana wax fiican ayay iila muuqataa. Ciyaartoydu waxay ka fikirayaan hadda inay sida ugu badan u sameeyaan tababarka, kuna raaxaystaan.” Ayuu ku daray.
Toddoba usbuuc ayaa laga joogaa maalintii ay Real Madrid guul-darrada xanuunka badan kala kulantay Real Betis, taasina ay siisay Barcelona fursadda ay labada dhibcood ku qabatay hoggaanka, laakiin Zidane waxa uu ku hanjabay in naadigiisu uu horyaalka ku dagaallami doono.
“11 ciyaarood ayaa noo hadhay, waxaananu isku diyaarinaynaa inaanu xili ciyaareedka ku dhamaysano si wanaagsan oo xooggan, ugu dambayntana waxa ugu muhiimsan waa inaanu wax walba u hurno inaanu wax uun ku guuleysano.” Ayuu yidhi.
Isaga oo hadalkiisa sii wata waxa uu yidhi: “Halkan ayaanu joognaa, tanina (guusha) waxay ku jirtaa dhiigga kooxda, inaanu isku dayno inaanu wax ku guuleysano.
“Waxaan ku faraxsanahay inaan mar kale la shaqeeyo ciyaartoyda, waana waxa ugu muhiimsan 60 maalmood kaddib. Waxaanu ku faraxsanahay inaanu kusoo laabano Valdebebas. Waxaanu qorshaynay sidii aanu jid ugu samayn lahayn tababareyaasha jimicsiga, ciyaartoyduna sidoo kale way ku faraxsan yihiin inay awoodaan inay tababartaan, inay wada joogaan iyo inay ku raaxaystaan waxa ay jecel yihiin inay qabtaan, taas oo ah inay ciyaaraan kubadda cagta.” Ayuu hadalkiisa ku xidhay.